Ciidanka XDS oo howl-gallo ka sameeyay inta u dhaxeysa Tayeegloow iyo Xuddur – Radio Muqdisho
Ciidanka XDS oo howl-gallo ka sameeyay inta u dhaxeysa Tayeegloow iyo Xuddur
Guddomiye kuxigeenka degmada Xudur Aadan Cabdi Maxamed oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in ciidammada Xoogga Dalka ay howl gallo ka sameeyeen deegaanno dhowr ah oo isku xira Xudur iyo Tiyigloow, halkaasi oo si dhuumaaleysi ah ay dadka ugu waxyeeleyn jireen maleeshiyaadka argagixisada ah ee Al-Shabaab.
Aadan Cabdi ayaa sheegay in Howlgalkaas ay ciidamada dowladda ku dileen 10 kamid ah kooxda argagixisada ah ee Al Shabaab oo uu ka mid yahay horjoogihii kooxdaasi u qaabilsanaa gobalka Bakool.
Guddomiye ku xigeenka ayaa hadalkiisa intaa ku daray in ciidammada dowladda ay howlgalkaasi ku soo furteen hubkii ay dadka ku dhibaateyn jireen kooxda Al Shabab.
Howlgakan ayaa ujeedakiisu ahaa sidii loo ciribtiri lahaa maleeshiyaadka sida dhuumaaleysiga ah waddooyinka ugu gala dadka shacabka ah gaar ahaanna deegaanada isku xira Xudur Iyo Tiyigloow.
Wasaaradda Waxbarashada oo sheegtay in 15’ka bishaan loo fariisan doono Imtixaanaadka Dugsiyada sare ee dalka